Mpanamboatra Caps mpamily - Caps mpamatsy mpamokatra & trano famokarana China
Misakafo Chef Mpiofana Chef Mpihandro Chef U408S0100S
Marika CHECKEDOUT Item Code U408S0100S Lehilahy SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef cap, waiter cap, waiter sela lamba 65/35 poly / cotton GSM.235g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, mahatohitra ho mavitrika, ary manao ...
Misakafo Chef Mpiofana Chef Mpihandro Chef U408S0400A
Marika CHECKEDOUT Item Code U408S0400A Size ONE SIZE Ireo teny lehibe amin'ny chef cap, waiter cap, waiter sela Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, mahatohitra ho mavitrika, ary manao ...
Misakafo Chef Mpiofana Chef Mpihandro Chef U408T0100A
Marika AN-TOKO FAMPISEHOANA Code Code U408T0100A Lehibe SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef caps, waiter cap, waiter sela Fabric Poly cotton 65/35 Ny kofehy manjaitra kofehy Polyester dia antsoina koa fa kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan-tsakafo ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary tsy kankana ...
Misakafo Chef Mpiofana Chef Mpihandro Chef U408S0600A
Marika CHECKEDOUT Item Code U408S0600A habe MISY SAIZAKA Ireo teny fototra amin'ny chef cap, waiter caps, satroka waiter Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, mahatohitra ho mavitrika, ary manao ...
Misakafo Chef mpamily mpamily kofera fisakafoanana C4 U410S0100B
Marika CHECKEDOUT Item Code U410S0100B habe MISY SAIZAKA Ny teny fototra amin'ny chef cap, waiter cap, satroka waiter Fabric 65/35 poly / cotton GSM.155g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, mahatohitra ho mavitrika, ary manao ...
Misakafo Chef Mpiofana Chef Mpihandro Chef U408S1200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U408S1200A habe MISY SAIZAKA Ireo teny fototra amin'ny chef cap, waiter cap, satroka waiter Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, mahatohitra ho mavitrika, ary manao ...